Sein Lyan - စိ န် လျှံ: စိတ်ထဲရှိတာက
Writer Sein Lyan Time 11:20 pm
အယ် ဒီမှာလည်း တစ်ပဲကွ ကိုဖိုးစိန်ဆီမှာ တစ်ရဖို့က လွယ်တာမဟုတ်ဘူး အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ရပြန်ပဟ တစ် အဟိ။ ဖတ်ပြီးမှ မန့်တော့မယ် အဟဲ
ကိုကြီးဖိုးစိန်ရေ ညီမလေး ရတော့ဘူး မနက်ကျောင်းသွားရမယ်ဆိုတော့ နှစ်ပါယူပီး ပြန်ပီနော် ကျောင်းကပြန်လာမှ ဖတ်ပြီး မန့်တော့မယ်။ ကိုမြစ်ဆိမှာဝက်ရဲ့ ဘူသိုင်းမိထားလို့ မူးနေတယ် အဟိ။ မနက် အဆိပ်ဖြေပီးမှ ပြန်လာတော့မယ်နော် အဟင့်။
ပါးလုံးလေးလိုပဲ မနက်ဖြန်မှ ဖတ်တော့မယ်...
ဖိုးစိန်ကို အသေချစ် အရှင်ချစ် အပြတ်အသတ်ချစ် လှပ်လှပ်လှပ်လှပ် ချစ်ရပါတဲ့
13 October 2009 at 00:26
ဖြူတုတ် လာလာဖတ်နေတာတော့ကြာနေပြီ။ ဖတ်တိုင်း မမန့်ဖြစ်လို့သာ။ ကိုဖိုးစိန်က စာရေးတော်တော်ကောင်းတယ်။ အားပေးလျှက်...
အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ စိတ်မကောင်းဘူး။
ဒါပေမယ့် စိုတဲ့လက် မခြောက်စေချင်လို့ စလုံးမလာဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ။
(ဈေးအပေါဆုံး ရေခဲမုန့်ပဲ ဝယ်ကျွေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် :P )
နောက်တင်မယ့် ပိုစ်လေးက ချစ်စရာလေး။ပြုံးရတယ်။ဆက်ရေးပေးပါ။
ဒီဇင်ဘာ စလုံးလည်မယ်ပေါ့ အားကျလိုက်တာဗျာာာာာ
မွေးနေ့ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းအကို အမ များအားလုံးကို ကိုဖိုးစိန်နဲ့ ထပ်တူ ဆုမွန်ချွေပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဒီမွေးနေ့မှ နောင်နှစ်များတိုင် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ။
နောက်တင်မဲ့ သရက်သီး ဇာတ်လမ်းလေးလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဟိဟိ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
မြန်မြန်တော့တင်ပေါ့ဗျာ။ တစ်တော့ပေးနော်။ အဟီးးးး
အေးပေါ့ဗျာ ...မီလျံနာတွေဆိုတော့ စလုံး သွားလည်ရတာနဲ့ ဆလိမ်ကိုသွားလည်ရတာနဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ.... အဖေဗိုလ်ချုပ်၊ အမေမိုးကုတ်သူ ဆိုတော့လဲ ပိုက်ဆံကိုရေလို သုံးနိုင်တာ မဆန်းပါဘူးဗျာ..။ ကျနော်တော့ မသေချာဘူး စလုံးကိုလာဖို့ ပိုက်ဆံက မရှိဘူးဆရာရေ.....။
မအိပ်ပြန်ဘူးလား .. မျက်တွင်းဟောက်ပက်နဲ့ ဆို မလှပါဘူး. များများအိပ် များများစား. လိမ္မာတယ်
စင်္ကာပူရောက်ရင် တွေ့မယ်.. သီတင်းကျွတ်ကန်တော့တာအတွက် မုန့်ဖိုးပေးမယ်.. မလှရင် မုန့်ဖိုးမပေးဘူး
စိန်လေးရေ ကိုယ်ကတော့ ရှင်းတယ်နော့် စိန်လေးနဲ့ တူတူမလည်ဘူး လျှောက်မပို့ဘူး ဟွန်းးးးးး) ဘာပြောပြော ဘယ်လောက်ချော့ချော့ တောင်ပေါ်သားပဲ လာမပြောနဲ့ လိုက်မပို့ဘူး...
ကျနော့်မွေးနေ့လေးကို အသိအမှတ်ပြုပေးတာ ရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။ စိတ်ကို ပေါ့ပေါ့ထား ညစ်မနေနဲ့ဗျို့ စိန်လာမှ ပေါ်နဲ့ တွေ့မယ် အဟေးဟေးးးး ခုကတည်းက စိတ်ကူးလေးနဲ့ အဟားဟားးးးးးးးးးးး
13 October 2009 at 03:36
အော် ဒါလည်း အတတ်ပညာတစ်မျိုးပါပဲလား
ဒါထက် စကားမစပ် ခုတလောအိပ်နေတယ်ဆို
သိပ်တော့မထူးပါဘူး အိပ်လည်း နဂိုရှိမှာ နဂိုင်းထွက်တာ
နော့ craton ရယ် ..(အမြန်လာထောက်ခံလိမ့်မယ်)
လာပါတယ် ဘကြီးတော်ရာ။ မွေးနေ့ကြိုဆုတောင်းပေးအတွက်ရော အတိုင်းထက်အလွန်(နောနော်) ဝမ်းသာမိပါတယ်။ တလနွန် ဘေးနားမှာ တူးရီးတော် လို့မတတ်ပေးတဲ့အတွက် စိတ်ဆိုးတယ်း( စင်ကာပူလာရင် ရှောင်မှာ ။
ငါးပတ်တောင် နေမှာဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးရယ်။ စင်ကာပူဘလော့ကာတွေအားလုံးက ကိုဖိုးစိန် ကို တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း လိုက်ပို့ ပေးမှာ :)))))))
အော် ပျောက်လှမှတ်တယ် ဂလိုကိုးးး
ဂယ်ကြီးလာမှာပေါ့နော်။ (ခုထဲက အိမ်ကြိုပြောင်းထားတယ် ဘူမှမသိအောင် ဖုန်းနံပါတ်လဲ ပြောင်းလိုက်ပြီ။ အဟီးးးး)
လာပါ လာပါ တရုတ်စာ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ကြာဇံကြော်၊ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ၊ထမင်းပေါင်း၊ဝက်သားပေါင်း...... စားမလားးးးးးးး
မြန်မာစာ ငါးသလောက်ပေါင်း၊ငါးချဉ်၊ ကြက်သားကာလသမီးချက်၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ဝက်ပုန်းရည်၊မုန့်ဟင်းခါး၊အုန်းနို့်ခေါက်ဆွဲ......စားမလားးးးးးး
ဒါနဲ့ ဘူပြောတာတုန်း မွေးနေ့လို့
အိုးဟိုးးးး ဒါကြောင့် ပျောက်နေတာကိုး လယ်သူထိန်းဖိုးစိန်က ....
အထုတ်အပိုး ပြင်တာကလည်း မစောလွန်းဖူးလားအေ ..လပျံ ဘယ်နှစ်စီးတိုက် သေတ္တာ ဘယ်နှစ်လုံးတောင် ပါမှာလဲ ...တော်သေးတာပေါ့ စလုံးပဲသွားလို့....
ကမ္ဘာပတ်ရင်တော့ ခါးပတ်ပါလာမှာ သေချာတယ် .. ဟိဟိ ။
စလုံး က အပြန် ထဆင်ထူး ဝင်လည်လေ ... ဟဲဟဲ ...ယပက်လက် ရောက်ရင်တော့ ဋ္ဋ (ဒရင်ကောက်) ဟင်း ချက်ကျွေးမယ် ......
ဘယ်က စပြောရမလဲလို့ အရင်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်... ပို့စ်တစ်ပုဒ်တည်းမှာ အကြောင်းအရာက အမျိုး ၂၀ လောက်ပါနေတဲ့ အစုံသုတ်လို့ဖြစ်နေတော့ :P
၁။ ခုတလော စိတ်က မကောင်းတကောင်း ရူးကြောင်ကြောင်...
>> ဒါကတော့ မွေးရာပါပဲဟာ သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူးလေ... နော့ :P
၂။ စာတွေရေးတယ် အဆုံးသတ်ခက်နေတယ်... ရေးလက်စ တပိုင်းတစနဲ့ တခြားအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ရင် ဆက်ရေးလို့ မရတော့ပြန်ဘူး..
>> မပူနဲ့ ဒါလည်း ဘ၀တူပဲ...
၃။ ဘလော့ဂ်ဂါ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို အသေချစ် အရှင်ချစ် အူယားဖားယားချစ် မယားဒယားချစ် ...
>> အင်း ပြောတာလည်း မင်းပါပဲ... ဟီး စတာ... :P
၄။ စားရေးမကောင်းပါဘူး ကိုယ်ရေးတတ်သလိုလေးရေးတာပါ ... ဘာညာ... ဘာညာ
>>အဲ့လိုတွေ ရေးရေးပြီး ကောမန့်တွေအများကြီးရအောင်ယူတယ်... လူနောက်... :P
၅။ ဘာာာာာာာာာာ......... ဒီဇင်ဘာ စလုံးလာမယ်... ဟုတ်လား... :O
>> အဲ့ဒီအချိန်ထိ စလုံးမှာ ရှိချင်ရင်လည်းရှိမယ်... ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်မှာ အဖေနဲ့အမေကို ဒုက္ခပြန်ပေးရင်လည်း ပေးရမယ် ဒါတော့ မသေချာသေးဘူးပေါ့နော်... ရှိရင်တော့ prawn mee ၀ယ်ကျွေးမယ်... ဂယ် ပြောတာ... Promise.. :)
>> happy birthday to all of you...
ဖိုးစိန်ပြောတဲ့ ညီလေး အရဲ၊ ပေါ်ပေါ်၊ မရောင်၊ မမေလေး၊ မမယ်ကိုး၊ တလနွန်၊ သံလွင် ...
၇။ သူက အမြည်းတွေ ဘာတွေလုပ်လိုက်သေးတယ်...
>> ကြွားတာလား... သူများခြံထဲမှာဟုတ်ဘူးနော် ... နာတို့အိမ်မှာလည်း မချစ်စု သရက်ပင်ရှိတယ်... ချိုမှချို... အလုံးကလည်း အကြီးကြီး ... သူအသီးသီးရင် ခူးလို့တောင်မနိုင်ဘူး ... တောင်းကြီးနဲ့ လေးငါးတောင်းရတယ်... ပြိုင်မလား ... လာလေ ဆက်ရေးပါ ... ဆက်ရေးလိုက်စမ်းပါ.. ဟင်း ဟင်း ...
စိမ်းလည်း ပျော်လို့ စနောက်သွားတယ်...
ဒီနေ့ နားရက်မို့လို့... :P
ဒကာမတယောက် လာသွားတယ်လို့ မှတ် :P
ကိုကြီးစိန် ပျောက်နေတာ ထုတ်ဝေသူတွေကို ပုန်းနေမှန်း သိပြီးသား....
ဟယ် ဖိုးစိန် လာလည်မဲ့ရက်က အမဒီမှာမရှိဘူး အမကဒီဇင်ဘာ၂၆မှ ဒီကိုပြန်ရောက်မှာ ဖိုးစိန်ကိုတွေ့ချင်ပါသေးတယ် တွေ့ခွင့်ကြုံရင်ပေါ့
ဟား နောက်ပို့စ် မြန်မြန်တင်ဗျာ ရယ်ရတယ် သေအောင် နောက်တခါ သားတို့တွေ သရက်သီးကို မခိုးစားတော့ပါဘူးရှင့်တဲ့ အဟိ ကတိတည်တယ်နော် ကျောင်းကပြန်ရောက်တာ အဝတ်အစားမလည်းပဲ စာထိုင်ဖတ်နေတာ ရယ်ရတယ် ခရီးစဉ်ပျော်ရွှင်အစဉ်ပြေပါစေဗျာ
စိတ်ထဲ ရှိတာလေးပြောလိုက်ရတော့ ပေါ့သွားတယ်ဟုတ်။
ကိုယ်လည်း ဘယ်မှကို ကောင်းကောင်း မရောက်ဖြစ်ဘူးလေ။
သယ်ရင်းကို လာကြိုမယ် စင်ကာပူလေဆိပ်မှာ။
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ပျော်ပျော်နေပါကွာ။
ပါးစပ်ရှိလို ပြောကြတာပါကွာ။ ပြောကျပါစေ။
ဘာမှစိတ်မညစ်နဲ့ ငါးပတ်စာ လောက်အောင်ရှာခဲ့ကြားလား။
ဟဲဟဲ နောက်တာ ညီမလေး မိုးခါးပြောသလိုပဲ
ဒါကာ တစ်ယောက် လာသွားတယ်လို့ မှတ်။
ဖိုးစိန်ကို အရင်လိုမြင် အရင်လိုခင် အရင်လိုကြင်တဲ့
တက်ဂ်ပို့ စ်ပါ… ကျနော်သိသိမသိသိ တက်ဂ်ပါမယ်… များသောအားဖြင့် စကာင်္ပူ တနိုင်ငံလုံးက ဘလော့ဂါတွေကို တက်ဂ်ပါမယ်…
သြော.. အိမ်ပါ ပါမယ်ဆိုရင်တော့ ၃ ယောက်ပေါင်း
စင်္ကာပူမှာ ထိန်းနိုင်ကြတော့မှာ မဟုတ်ဖူး. မြင်ယောင်
တို့က အရင်ရောက်ဖူး တွေ့ဘူးသွားပြီ... သူများတွေနောက်မှတွေ့ရတာ သနားပါတယ်ကွယ်.
ဒါနဲ့ အောက်တိုဘာမွေးလရှင်မှာ ကိုယ့်နာမည်မပါတာ
တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့.. အင်းပေါ့လေ..
လုံးငကိုမအားလို့ ကိုယ့်ဘလော့မှာစာမတင်နိုင်တာ ၂လလောက်ရှိပြီ.. နည်းနည်းလေးအားလာတော့လည်း စာပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်..ကိုကြီးစိန်ဆီ အရင်ဆုံးရောက်တယ်နော... သူခမျာလည်း စင်ကာပူသွားရမှာတော်တော်ပျော်နေတယ်ပေါ့လေ.. ဟုတ်လား?
I'll give youaone treat too. No joking! :-)
But make sure you bring along one souvenir from Cyprus for me.
Welcome to S'pore. See ya!